Isikhathi se-Triassic: izici, i-geology, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphakathi kwenkathi ye- Mesozoic sinezikhathi eziningana lapho lokhu kwehlukaniswa khona isikhathi sokuma komhlaba. Namuhla sizokhuluma ngakho I-Triassic. Kukwahlukaniswa kwesilinganiso sesikhathi sokuma komhlaba kulezi zikhathi ezintathu lapho iMesozoic ihlukaniswe khona. Iqale cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-251 edlule futhi yaphela cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-199 edlule. Lezi zinsuku zokuqala nezokugcina azinembile kepha zimakwa yimicimbi ebalulekile kusukela ekubukeni komhlaba nokwakheka kwezinto. Kulokhu sithola ukuqothulwa kwesisindo se- I-Permian-triassic kanye ne-triassic-jurassic.
Kule ndatshana sizogxila ekuchazeni zonke izici, ibhayoloji nesimo sezulu seTriassic.
2 I-geassia ye-Triassic
3 Isimo sezulu seTriassic
Lesi sikhathi sibonakala kakhulu ngokuvela kwama-dinosaurs okuqala. Lezi zilwane zazimelwe amafomu e-bipedal, ukudla okudla ngokugcwele, nosayizi omncane. Noma kunjalo, ekupheleni kweTriassic base bevele bathole ukuhlukahluka okukhulu futhi yebo base beyizilwane ezinomgogodla womzimba ezivelele kuyo yonke iplanethi. Ukunwetshwa kwama-dinosaurs kufinyelele ekuqothulweni kwamanye amaqembu ezilwane zangaphambilini njengama-archosaurs akudala kakhulu kanye nezilwane ezinwabuzelayo eziningi ezincelisayo ezazisabalele ngalesi sikhathi.
Ngalesi sikhathi cishe wonke amazwe eplanethi yethu ayegxile ezwenikazi elilodwa elibizwa ngePangea. Leli zwekazi lalinomumo ongu-C futhi empumalanga kwakunguTethys Ocean kanti elizungezile kwakunguPanthalassa Ocean. Lolu lwandle lubhekwa njengolwandle lwasemhlabeni wonke ngoba lumboze umhlaba wonke.
Ngalesi sikhathi kwakukhona izidalwa eziningi olwandle olujulile ezafakwa ngalesi sikhathi futhi ezanyamalala ngokudonswa kwamacwecwe olwandle ngokunyakaza okubangelwe yimisinga ye-convection yengubo yoMhlaba. Lesi yingakho kungaziwa okuningi olwandle oluvulekile noma ngesikhathi seTriassic.
Izwekazi lasePangea laqala ukuhlukaniswa ngalesi sikhathi ikakhulukazi ngesikhathi seTriassic esedlule. Futhi ingabe lesi yisikhathi Ihlukaniswe ngezikhathi ezintathu ezaziwa njengeLower Triassic, Middle Triassic, neUpper Triassic. Yile ndlela i-super continent eyahlukaniswa ngayo nguLaurasia noGondwana. Ingxenye yokuqala iqonda lonke izwekazi lase-Asia, iNyakatho Melika neYurophu. Ingxenye yesibili yezwekazi elikhulu ihlanganisa i-Afrika, i-Arabia, i-India, i-Australia, i-Antarctica, kanye neNingizimu Melika.
I-supercontinent yayihamba kancane kakhulu ngasenyakatho ngesikhathi seTriassic. Yilapho i-supercontinent iqale khona ukukhombisa izimpawu zokuqala zokuhlukaniswa ezingxenyeni ezimbili eziyinhloko. Iziduli zokuqala ezazingatholakala ngaphandle kolwandle zabangelwa uqhekeko olwaluyimbangela yokwehlukaniswa kokuqala kwamazwe amakhulu. Lokhu kuqhekeka yikhona okwadala ukuwohloka kokuqala kwePangea futhi okwakwazi ukuhlukanisa lokho namuhla esikwaziyo njengeNew Jersey neMorocco.
Ngalesi sikhathi izinga lolwandle lakhuphuka kancane yize umthamo wezindawo ezavelayo wawusaphakeme impela. Futhi ukuthi ulwandle iTethys lwakha igebe elibanzi ebeliba yindlela yokuhlasela kwasolwandle.
Isimo sezulu seTriassic
Isimo sezulu salesi sikhathi sasivame ukushisa futhi somile. Lawa mazinga okushisa aphezulu abeyimbangela yemvelaphi nokwandiswa kwezingwadule kanye nama-evaporites. Njengoba iPangea yayinkulu, umphumela wokulinganisela wolwandle wawulinganiselwe kakhulu. Futhi ukuthi ulwandle lusebenza njengomengameli wamazinga okushisa omhlaba jikelele. Ngakho-ke, ezindaweni ezimaphakathi nezwe singathola ushintsho olukhulu ngokuzumayo emazingeni okushisa ngoba akukho ukusondela olwandle okungenzeka kulawula izinga lokushisa ngenxa yokusebenza kwemisinga yolwandle.
Isimo sezulu sezwekazi besinenkathi enkulu kakhulu ngalesi sikhathi ngamahlobo ashisayo kakhulu nobusika obubanda kakhulu. Njengoba ulwandle belungeke lusebenze njengesilawuli esishisayo, bekukhona amabanga okushisa ngokweqile kuzo zombili izinkathi zonyaka. Cishe bekunezimvula ezinamandla endaweni yase-Ecuador, yize kungekho bufakazi bokuthi i-glaciation iseduze noma kunoma yiziphi izigxobo. Eqinisweni, ngalesi sikhathi izifunda zasePolar ngokusobala zazinomswakama futhi zinesimo sezulu esipholile. Lesi simo sezulu sasiphelele ukukwazi ukuthuthukisa zonke izidalwa ezinjengezilwane ezihuquzelayo ezinegazi lazo liyabanda.
Njengoba sishilo ngaphambili, ulwandle lukhuphuke kancane ngesikhathi seLower Triassic. Ekupheleni kwalesi sikhathi kwaba nokuqothulwa okukhulu lapho ama-conodonts nezilwane ezihuquzelayo ze-placodont zaphela khona. Kulokhu kuqothulwa Ama-20% ezilwane zasolwandle anyamalala yize wonke la maqembu ebengatholakala ngesikhathi seJurassic. Iningi lezisulu ezaqothulwa ngenxa yokwanda kwama-dinosaurs kwakuyizizukulwane zezilwane ezihuquzelayo ezincelisayo nezilwane eziphila ezweni.
Njengoba kulindelekile endalweni, kunezilwane nezitshalo okuyizona ezihlomula ngokuyinhloko ekuqothulweni kwezinye izinhlobo, ngoba konke lokho kungaba yizilwane ezidla ezinye. Uma zingenazo izidalwa ezihlasela imvelo, abantu bazo bangakhula ngesivinini esisheshayo. Laba bahlomuli bokuqothulwa emhlabeni babengama-dinosaurs akhula ngokushesha, ikakhulukazi ngesikhathi seJurassic, futhi kwakulawula izindawo zokuhlala zasemhlabeni kuyo yonke inkathi yeMesozoic.
Okuwukuphela kwezilwane ezihuquzelayo ezingasinda ekwandeni kwama-dinosaurs kwakungu-ichthyosaurs nama-plesiosaurs. Ubufakazi besayensi buveza ukuthi kwakukhona izifundo eziningi zokuqothulwa ngesikhathi seTriassic. Enye yayisekuqaleni kwenkathi kanti enye yayisekugcineni. Isikhathi sokuqothulwa ezilwandle asicaci ngokuphelele kwisayensi kepha kunezimbangela zokuqothulwa kweTriassic okusalokhu kungaziwa.
Olunye lwezifundo eziphambili olwenziwa enyakatho-ntshonalanga ye-Arizona ngo-2002 alukwazanga ukukhombisa ushintsho olungazelelwe emvelweni noma emazingeni okushisa, ngakho-ke akunqatshelwe ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukuthi imbangela yokuqothulwa kwesimo sezulu iyisimo sezulu. Kulezi zikhathi ama-conifers namanye amaqembu ama-gymnosperms yiwo athatha indawo yezitshalo zezitshalo ngezimbewu ezazisabalele futhi zagcwala ezindaweni eziphansi ngalezi zikhathi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nesikhathi se-Triassic.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isikhathi se-Triassic
Inohlonze impela. Kungani usho ukuthi eTriassic ulwandle alukwazi ukusebenza njengomlawuli oshisayo?